Ogaden News Agency (ONA) – Puigdemont: Madaxwaynihii Hore ee Catalonia oo La Xidhay.
Puigdemont: Madaxwaynihii Hore ee Catalonia oo La Xidhay.
Hoggaamiyihii hore ee Catalonia, Carles Puigdemont, ayaa lagu xidhay dalka Jarmalka, sida uu qareenkiisu sheegay.
Waxaa la qabtay xilli uu ka yimid Denmark, kuna sii jeeday Belgium, Jaume Alonso-Cuevillas ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray. Ninkan ayaa laga doonayaa Spain isagoo lagu eedeynayo taageerada goonni-u-goosashada Catalonia.
Mr. Puigdemont ayaa magan-galiyo ahaan ugu noolaa dalka Belgium tan iyo aftidii la mamnuucay ee bishii Octobar ee sanadkii hore 2017 kii, taas oo lagu taageerayay goonni-u-goosadka Catalonia. Amar ka soo baxay Yurub oo isaga lagu soo xidhay ayaa dhowaan la soo saaray.
Xiisadda ka taagan Catalonia ayaa aad u kacsan, hoggaamiyeyaasheeda ayaana diiday qorshe lagu magacaabayo madaxweyne cusub kaddib markii la xidhay musharaxii ugu dambeeyay ee isu soo taagan doorashada madaxtinimada. Jordi Turull ayaa Jimcihii lala xidhay shan hoggaamiye oo kale, taas oo sababtay dibad-baxyo iyo isku dhacyo dadweynaha iyo booliiska ku dhex maray magaalada Barcelona ee caasimada Catalonia.